Na-eme ka cycmụaka emegharịrị: Ime Anwansi! | Crafts Na
Cycmụaka egwuru egwu: Ime Anwansi!
Obodo Santiago | | Crafts, Crafts maka ụmụaka
Otu n’ime ihe ụmụ anyị kacha amasị ha niile bụ ihe ndị ahụ juguetes nwere egwu. Ọfọn, ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ ihe egwuregwu dị oke ọnụ nke nwere ya, ka anyị cheta na oge ụfọdụ ihe kachasị mfe ma dị mfe ime bụ nke ụmụaka anyị nwere mmasị na ya kacha amasị ụmụ anyị mgbe ha zụtara ihe ụmụaka ji egwuri egwu otu ugboro. kpofu ha n'ime ihe eji egwuri egwu.
N'okwu a anyị nwere ike iji ọfụma mee ọjà nwere ihe dị mfe dịka ahịhịa, ahịhịa amị, ahịhịa amị ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ ịkpọ ha. A na-ere ha na nnukwu ụlọ ahịa ọ bụla. I gha acho otutu nke ichoro opi, ya bu, i nwere ike iji mkpuru ahihia ano ma obu iri na abuo mee ya.
E wezụga ahịhịa ị ga-achọ ntakịrị teepu ma ọ bụ teepu. Nhọrọ ọzọ bụ gluu, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịhọrọ teepu, ana m akwado ya n'ihi na ọ ga-aka mma, dị mfe ime na ọbụlagodi nchekwa. Dị ka ị pụrụ ịhụ na anyị chọrọ naanị ihe ole na ole ma ugbu a, ka anyị mee ọjà!
Ọ dị mfe dịka iwere ahịhịa na ibelata nke ọ bụla pere mpe karịa nke gara aga, anyị nwere ike iji onye na-achị ya tụọ ya. Anyị ga-aga n'ihu na-ebipụ ahịhịa ruo mgbe anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị ole na ole n'ime ha (dịka anyị kwuru na mbụ, ọtụtụ ndị ịchọrọ).
Mgbe e mesịrị, anyị na-etinye akwa nke teepu ma ọ bụ teepu, jiri nlezianya debe ahịhịa na ya, ma kechie ya na teepu ka ha wee jikọta. Ọ dị mfe ma na-atọ ụtọ!
Ozi ndị ọzọ - Crafts maka ụmụaka: The na-efe efe nsusu ọnụ
Foto - Ugboro abụọ
Isi mmalite - Ugboro abụọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Cycmụaka egwuru egwu: Ime Anwansi!
Ihe ebube nke manualidaes, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịchọpụta ọnụọgụ nke ihe ndị enwere ike ịme dị ka ihe bara uru
Arụrụ n'ụlọ mama uzommeputa
Crafts maka ụmụaka: The na-efe efe nsusu ọnụ